Hokkara Sudaan: Waraanniifi mormitoonni Sudaan waliigaltee mallatteessan - BBC News Afaan Oromoo
Humni Waraanaa Sudaaniifi mormitoonni waliigaltee aangoo qooddatanii yeroo ce'umsaa waggaa sadiif biyyattii bulchuu isaan dandeessisu mallatteessan.
Manni maree ce'umsaa humna waraanaa biyyattiifi mormitoonni yeroo dheeraaf walqoccolaa turanillee, amma garuu bakka qaamoleen jaarsummaadhaan gidduu isaanii jiran argamanitti akkasumas bakka dippilomaatonni biyyoota alaa argamanitti walii galteerra ga'aniiru.
Bulchiinsi mootummaa ce'umsaa Humna Waraanaafi Mormitootaaf aangoo walqixa qoodu kun waggaa sadiif kan turu yoo ta'u kan goolabamus erga filannoon walii galaa akka biyyattiitti geggeeffamee boodadha.
Waliigalteen kun waggooti sadan kanaaf karoora aangoo oolanaa biyyitti qaamoota lamaan jiddu itti naanna'u of keessa qaba.
Karoora kanaanin ji'oottan 21 jalqabaaf Bulchiinsi Mootummaa Ce'umsaa Humna Waraanaa aangoo olaanaa yemmuu qabaatu, bulchiinsi uummaata ammoo boodarra ji'oottan 18f hoggansa fudhatee sana booda gara filannootti galama.
Biyyoonni alaa Sudaan saamaa jiruu?
Sirna waliigaltee mallatteessuu kanarratti aanga'oonni gam-lamaaniiyyuu waa'ee egeree biyyattii fi seenaa haaraa galmeessuu irratti dubbataniiru.
Dhimmoota heera biyyatti ilaalchisee waligalteen lammataa Jimaata xumurama jedhamee eegama.
Biyyi waggoota kurna sadiif bulchiinsa nama tokkoo, Omar Hasan al-Bashir jala turte Sudaan, erga isaan aangoorraa buufamaniis rakkoon biraa ishee mudateera.
Ebla darbe Pirezidaantii biyyattii duraanii Omar Hasan al-Bashir aangoorraa buusuun kan aangoo qabate humni waraanaa biyyattii adeemsi isaa mormitoota waan hin gammachiisneef biyyattii ammas deebitee hookkaratti seente.
Haleella Sudaan Vidiyoo uummataan
Hogganaan itti aanaa bulchiinsa waraanaa Jeneraal Mohaammad Hamdaan 'Hemeti; Dagaaloon kun biyya keenyaaf "yeroo seena qabeessa" jechuu isaa AFP gabaase.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa Humna waraanaa fi mormitoota gidduutti dhalateen lubbuun dhibbootatti lakaa'amu badeera,qabeenyi barbadaa'eera.
Mormitoonni hedduun daandiitti ba'uun bulchiinsi siivilii biyyattii keessatti mirkanaa'uu akka qabu gaafachuu itti fufan.
Humni Waraanaa garuu gaaffii kanaaf gurra kennaa hin turre.
Qoccolloo yeroo dheeraa booda garuu yeroo ammaa biyyattii waan abdii horatte fakkaatti.
Waliigalteen ammaa kun hangam murteessaadha?
Gaazexeessaan BBC waa'ee nageenyaa irratti gabaasu Tomii Olaadippoo waan jedhu, dubdeebii ji'ootaan booda waliigalteen kun mallatteeffamuun isaayyuu waan guddoodha.
Kana jechuunis bulchiinsa waraanaa amata 30n duuba, Sudaan mootummaa siviiliin guutummaatti buluuf waggoota sadi qofatu hafa.
Qabxiileen waligaltichaa fi waaheen heeraa hanga yoonaa irratti wal hin galamne. ''Manni maree bilisaa'' biyyattii yeroo ce'umsaatti hoogganus fuulduratti hundaa'a.
Haa tahu malee, ammallee warri ji'ootaaf mormiirra turan hedduun garaan waan gahe hin fakkaatu.
Anga'oonni waraanaa mormaa turan, ce'umsicha yeroof gaggeessu. Kun ammoo qondaaltonni waraanaa daandiirratti isaan ajjeessanii fi dararan - seeratti dhiyaachuurraa bilisa bahuu danda'u.
Sudaan: Biyyoota alaatiin saamamaa jirtii?